Qabsoon ittaanu ODP keessaa OPDO yaasuudha! Kana malee nagaan hinjiru! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsoon ittaanu ODP keessaa OPDO yaasuudha! Kana malee nagaan hinjiru!
Jedhe Jaal Marroon SagaleeBosonaa Hayyee
Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Zoonii Dhihaa, Jaal Kumsaa Dirribaa (Jaal Marroo)’n waa’ee araara abbootii gadaan qindaa’ee, Finfinnee Magaalaa guddittii Oromiyaatti, ABO fi PDO gidduutti ta’amee sani akkamiin ilaalu, laata, jettanii hedduun keechan karaa keechaa messagen, na gaafachaa jirtu, akkasumallee yaadaan ka dhiphachaa jirtan illee danuudha.Dhugaan jiru kana. Jaal Marroon nagaa ni barbaadu, nagaa itti aansee bilisummaa barbaadu, WBO’n akkana . Araarri nu barbaachisa, araarri kijibaa fi goyyoomsaa garuu, nuuf hin malu, WBO’n hiikkatee mooraa seena wanni jettu sun, fafa, WBO’n garuu, saba isaa fi nagaa barbaada, osoo akka WBO’tii rasaasni tokko hin dhukaatu, dachii Oromiyaa irratti.
Garuu, wanni dalga nutti ta’u, hedduutu, jira, Finfinneetii, araara jedhee hunduu nagaa labsa Abbaa Gadaa waliin, as nu cinaa garuu, waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesa, hanga kun hin dhaabbanneetti, ofumaa naratti hin hafin jedhanii, guyya guyyaan walga’uun hin taatu.
Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa imaanaa ganamaa sana hin nyaanne, WBO fi saba Oromoo walitti dabarse, egaa kun waan ajaa’ibaati, uummanni Oromoo maal jedha???? Murtiin kamillee kana booda ka paartii kamii miti, ka uummata Oromooti. WBO’ ka hidhachiise, uummata Oromoo fi Roorroodha. Kanaaf, abbumti, arge, waa’ee WBO qeequu fi seequu yaa dhiisu.
Gaaffii (walabummaa Oromiyaa) keewwata mootummaa Soddomii sagal (39) irra jiru dhugoomsuu fi dhugummaa isaa ijaan arguu.
amallee Uummanni Oromoo hin bilisoomne, Bilisummaa gonfachuuf, ammoo ammallee walii fi galuu eenyummaa fi Oromummaa ofii wal barsiisuudha. San booda WBO jabeeffatanii Bilisoomuudha.
Kanuma, dubbiin, araaraa fi tokkummaa booda, waliin Oromiyaa utubnee haa ijaarru, kun dhaamsa WBO’ti, Ka Oromoo ta’e hundaaf dubbiin kana caaltu, jira jedheeti, hin yaadu, kanaaf ammoo Egeree Oromiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo irratti hundi keenya haa yaadnuun ammallee dhaamsa.